Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo laga helay Cudurka CORONAVIRUS
16th March 2021 by Barre Leave a Comment
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici ayaa laga helay Cudurka halista ah ee COVID-19 oo mar labaad kusoo laba kacleeyay deegaanada Somaliland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Qoraal uu soo saaray Madaxweyne Cabdiraxmaan Seylici ayaa waxaa uu ku xaqiijiyay in laga helay Cudurka COVID-19, kadib markii lagu sameeyay baaritaano kala duwan, kadibna la ogaaday inuu haleeyay Cudurka.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa sheegay in xaaladda Caafimaad ay wanaagsan tahay, isla markaana uu ku jiro karantiil, wuxuuna shacabka ugu baaqay inay ay raacaan tilmaamaha Wasaaradda Caafimaadka.
Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ayaa horey looga helay Cudurka COVID-19 oo ku dhacay, waxaana ugu dambeeyay Wasiirka Horumarinta Maaliyada Somaliland oo ku sugan Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Cudurka COVID-19 oo dunida dhibaato ba’an ku haya ayaa maalmahana dambe ku soo laba kacleeyay qaar ka mid ah degaannada Soomaalida, waxaana la sheegayaa in dadka shacabka ah aaney intooda badan raacin tallooyinka Caafimaad ee loo jeedinayo.
Taliye Ciidan oo xilka looga qaaday burburintii Dugsiga Hoyga Xamar
27th February 2021 by Barre Leave a Comment
Taliyaha Ciidanka Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa xilka qaadis ku sameeyay Taliyihii Qaybta Waliyow Cadde, isagoo mid cusub u magacaabay Taliskaas.
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Taliye Xijaar ayaa waxaa xilka Taliyaha qeybta Waliyow Cadde loogu magacaabay inuu noqdo Yaasiin Nuur Kheyre Ganeey, isla markaana bedelaya Taliyihii Waliyow Cadde.
Xilka qaadista Taliyaha ayaa ka dambeeysay kadib markii lagu eedeeyay howlo burburin ah oo Ciidam ka tirsan kuwa Booliska dowladda ka fuliyeen Iskuulka Hoyska Xamar, si loogu wareejiyo Ganacsato.
Taliyaha Ciidanka Booliska Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo shalay tegay Iskuulka Hoyska Xamar ee la burburiyay ayaa waxaa uu sheegay in arrintaas ay ka xun yihiin, isla markaana tallaabo laga qaadi doono Ciidankii fuliyay burburinta.
Arroornimadii hore ee shalay ayey aheyd markii Ciidamo ka tirsan Booliska tageen halka uu ku yaalla Dugiga hoysga Xamar, isla markaana ay ku bilaabeen burburin, si loogu wareejiyo dhulka Ganacsaro, waxaana arrintaas si kulul uga hadlay Madaxda DFS.
Qaxooti Yamaniyiin ah oo ka soo carartay colaadda Yeman oo soo gaaray Boosaaso
25th February 2021 by Barre Leave a Comment
Dooni sidey 164 qoys oo ka soo qaxay Colaadaha ka aloosan Dalka Yeman ayaa ku soo xiratay Dekedda magaalad Boosaaso, waxayna u badan yihiin dadka la socda doonida haween iyo carruur kuwaasi oo isugu jira qoysaska doonidu siday Soomaali iyo Yamaniyin.
Mas’uuliyin ka tirsan Puntland gaar ahaan Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qoysaskan ku soo dhaweeyay Gudaha dekadda Boosaaso
Doontan ayaa noqonaysaa tii seddexaad ee Boosaaso soo gaarta maalimihii la soo dhaafey, taasi oo kordhinaysa qaxootiga Yemaniyiinta ah ee ku sugan gudaha Puntland, kuwaasi oo horay loo kala dajiyay magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho .
Ciidanka Puntland oo howlgalo ka sameeyay deegaano Buuraley ah
21st February 2021 by Barre Leave a Comment
Ciidanka ammaanka dowlad Goboleedka Puntland ee PSF ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ay howlgal qorsheysan ka sameeyeen deegaano buuley ah oo ka tirsan Gobolka Bari ee Maamulkaas.
Howlgalka Ciidamada Puntland ayaa waxaa uu ujeedkiisu ahaa mid looga hortegayay miinooyinka Al-shabaab, xiliyada qaarkood geliyaan waddooyinka u dhexeeya deegaanada kala ah Sugure, Balikhadar iyo Galgala.
Taliska Ciidanka PSF oo ka hadlay howlgalka ayaa sheegay in Ciidamada ay macluumaad ka heleen deegaanada howlgalka laga fuliyay, isla markaana ay doonayaan inay ka hortegayaan falalka amni darro ee halkaas ka dhaca.
Sidoo kale Ciidamada ayaa howlgal kale oo amniga lagu xaqiijiayay ka sameeyay deegaanada Ceel Kharaar, Dameer,Ceel Cadayle iyo Xamur ee Buuraha Cal Madow ee Gobolka Bari, maadaama deegaan ka tirsan halkaas ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Al-shabaab iyo Daacish.
Inta badan Ciidanka ammaanka dowlad GoboleedkaPuntland ayaa howlgalo kala duwan ka sameeya deegaano ka tirsan Gobolka Bari, waxaana ay kusoo qabteen xubno ka tirsan Al-shabaab iyo Daacish iyo hub.
Madaxweyne Qoor Qoor oo la kulmay xubnaha ugu muhiimsan Mucaaradka Villa Somalia
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor, ayaa xalay guryahooda Muqdisho ku booqday Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif, Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre.
Madaxtooyada Galmudug ayaa shaacisay in Madaxweyne Qoor Qoor uu guryahooda ku booqday Madaxdaas hore, oo haatan kamid ah Midowga Murashixiinta Muqdisho, islamarkaana mucaaradsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wararku waxay sheegayaan in ay ka wada-hadleen xaaladda Siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna xiisadda ka aloosan Muqdisho iyo Arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, oo weli uu ka taaganyahay khilaaf u dhexeeya dhinacyada siyaasadda dalka.
Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo shuruudo cusub ku xiray Shirka Muqdisho
Maxaa baajiyey shirkii ay ahayd in uu Muqdisho ka dhaco?
Illaa iyo weli ma cadda goorta uu qabsoomayo shirkii arrimaha doorashada ee lagu waday inay isugu yimaaddaan madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada oo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu ku baaqay in uu furmo 18-kii bishan feberaayo ee maanta 20-ka ah.
Madaxweynaha Hirshaballe Cali Guudlaawe ayaa gaadhay shalay magaalada Muqdisho si uu uga qeybgalo kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee looga hadlaya heshiiska doorashada.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa isna maalin ka hor sii gaadhay Muqdisho balse dhiggiisa Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayaan wali u safrin Muqdisho. Ma cadda goorta ay halkaa gaari doonaan.
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, ayaa BBC-du la xidhiidhay si aan waxa uga ogaanno waxa baajiyey dhaankooda. Maxamuud Sayid ayaa sheegay in xaaladaha amni ee taagan ay baajiyeen.
‘Mar walba annaga Jubbaland waxaan hoosta ka xarriiqaynaa Soomaalidu in ay wada hadasho, waxa aan meesha ku jirinna cidda soo gelinaysaa ka bixiso, si degganna doorashada loo qabto.’
“Meel kasta oo lagu qabanayana Jubbaland diyaar bay u ahayd, soo jeedintoodii u danbaysayna waxa ay ahayd in Muqdisho lagu qabto. Iyada oo saamilaydii siyaasaddana ay ku dhan yihiin”
Shirkaasi ayaa lagu waday in la soo gabgabeeyo shalay oo Jimce ah, waxaana Jubbaland caqabadaha helay ku qeexday in xaalkii Muqdisho ay shalay ahayd, dibna u qiimayn doonaan xaalka oo xilliga danbe ee uu qabsoomayo ay ka fiirsan doonaan.
Qoraalka sawirka, .
Dhanka kale Jubbaland ayaa si weyn u dhaleeceysay falalkii xalay illaa saaka ka dhacay Muqdisho, iyadoo wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidamada dalka ee loogu tala galay inay la dagaalamaan cadawga loo isticmaalay in lagu weeraray mas’uuliyiin ka tirsan saamileyda siyaasadeed ee dalka.
“Dowladda Jubbaland waxay nasiib darro u aragtaa in dowladda Federaalka ee waqtigeeda dhamaaday, iyadoo awoodi kartay inay ka shaqeyso in xal siyaasadeed laga gaaro kala duwanaanshaha afkaaraha inay qaaday tallaabooyin gurracan oo ciidankii dalka u isticmaashay si ka baxsan sharciga, si la mid ah siday ku sameysay Gobolka Gedo”
Madaxweynaha ayaa madaxda maamul gobleedyada ku casumay Muqdisho si loo dhameystiro heshiiskii doorashada.
Dhowr arrimood oo uu muran ka taagnaa ayaa guddi farsamo oo dhinacyada matalayaa ay heshiis ka gaadheen isbuucan markii ay ku kulmeen Baydhabo. Laakiin madaxweyne ku xigeenka Jubbland ayaa sheegay in go’aamadaas ayna kamadanbays ahayn.
Qaar ka mid ah madaxda mucaaradka ayaa maaamul goboleedyada ugu baaqay inay iska diidaan ka qeybgalka kulanka Muqdisho ka dib rasbhadihii ka dhacay caasimadda 24 saac ee la soo dhaafay.
Ma cadda inuu shirkaasi qabsoomi doono iyo xilliga uu dhici doono toona, balse Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday maanta in dhinacyada ay si deg deg ah u kulmaan.
Haddaba Maxaa la isugu haystaa halkii shirku ka dhici lahaa?
Maamulka Puntland horey ayuu u sheegay in Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aaney madaxweyne u aqoonsaneyn marka uu dhamaado muddo xileedkiisa oo ku ekaa sideedii bishaan Febraayo.
Cabdullaahi Cali Xirsi Tima-cadde, oo ah wasiirka warfaafinta maamulkaas ayaa BBC-da ugu sheegay in Madaxweyne Farmaajo ay ugu yeeri doonaan marka uu xilku ka dhamaado madaxweynihii hore.
Markii ay ka jawaabayeen baaqa Madaxweyne Maxamaed Cabdullaahi Framaajo ayaa sidoo kale Puntland waxaa ay sheegtay in aan lagala tashan in Garoowe shirka lagu qabto sidaas daraadeedna ay iyaguna ku baaqayaan in Muqdisho loo weeciyo.Maamulka Jubaland iyo qaar ka mid ah Musharixiinta Mucaardka ayaa iyaguna ku raacay oo xoojiyay baaqa Puntland ee ahaa in shirka Muqdisho lagu qabto.